Jarmalka oo xiray nin aragagixisonimo lagu tuhmay - BBC News Somali
Image caption Eedaysanaha la qabtay
Booliska Jarmalka ayaa sheegay in ay qabteen eedaysane la rumaysan yahay in uu qorshaynayey weerar bambaano.
"Waanu daalnay waanse faraxsannahay: waxaanu xalay magaalada Leipzing ku qabanay eedaysanihii" ayay boolisku ku yidhaahdeen fariin ay ku qoreen boggooda twitter-ka.
Ka dib markii la weeraray guri ku yaalla magaalo tan lagu xidhay u dhaw oo la yiraahdo Chemnitz Sabtidii, ayaa booliska oo daba socday ninkan eedaysnaha ah ee ka soo qaxay Suuriya, Jaabir Al-Bakr, ay qabteen.
Baadheyaashu waxay sheegeen in dhawr boqol oo giraam oo "walxo aad u qarxa ah" laga helay dismaha. Waxaa waxyaabahan qarxaya loo qaaday meel ka baxsan dhismaha oo lagu qarxinayey.
Waxyaabahan qaraxa loogu talo galay ayaa sida la sheegay waxay la mid yihiin kuwii loo adeegsaday weeraradii lagu qaaday Paris iyo Brussels. Warbaahinta ayaa tilmaantay in laga yaabo in Al-Bakr uu qorshaynayay inuu beegsado garoonka Berlin.
Laba qof oo Al-Bark isgaadhsiinta ay ka wada xidhiidheen ayaa iyagana lagu xiray goob laga raaco tareennada Chemnitz, qof kalena waxa lagu xiray dhismaha laga helay walxaha qarxa oo ku yaal xaafadda Fritz-Heckert.